पुरानो फोनबाट नयाँ फोनमा डाटा तथा कन्ट्याक्ट कसरी ट्रान्सफर गर्ने ? जान्नुहोस् सजिलो तरीका - Technology Khabar
» पुरानो फोनबाट नयाँ फोनमा डाटा तथा कन्ट्याक्ट कसरी ट्रान्सफर गर्ने ? जान्नुहोस् सजिलो तरीका
जब हामी नयाँ फोन किन्छौं त्यसबेला डाटा ट्रान्सफर गर्नमा धेरै तनाव हुने गर्दछ। हामी चिन्तित हुने गर्दछौं कि कसरी सबै सम्पर्कहरू र डाटा पुरानो फोनबाट नयाँ फोनमा हस्तान्तरण गर्ने भनेर ।
आज हामी यस समस्यालाई पार गर्न केही सजिलो तरीकाको बारेमा जानकारी दिइरहेका छौं। यी तरीकाहरुबाट तपाईंले पुरानो फोनको डाटा नयाँ फोनमा कुनै समस्या बिना नै स्विच गर्न अर्थात सार्न सक्नुहुनेछ।
गूगल एकाउन्टबाट ट्रान्सफर- फोनमा भएका कन्ट्याक्टहरु स्थानान्तरण गर्ने सजिलो तरीका भनेको सबै सम्पर्कहरू तपाईंको गूगल खातासँग सिंक गरेर राख्नु हो। जब तपाई नयाँ फोनमा एक्सेस गर्नुहुन्छ, गूगल खातामा सिंक गरिएका सबै सम्पर्कहरू नयाँ फोनमा सजिलै हस्तान्तरण हुनेछन्।
सिम कार्डबाट स्थानान्तरण- यदि सम्पर्कहरू गूगल खातासँग समन्वयन गरिएको छैन भने, तपाईं तिनीहरूलाई सिम कार्डबाट पनि ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ, तर २५० सम्पर्कहरू मात्र सिममा बचत गर्न सकिन्छ, त्यसैले ट्रान्सफर पनि त्यति संख्यामा मात्र हुनेछ। यसको लागि, फोनको कन्ट्याक्ट एप खोल्नुहोस् । मेनूमा क्लिक गर्नुहोस् । प्रबन्ध गर्नुहोस् र आयात गर्नुहोस् (Click on menu>manage>import/export) । केहि फोनहरुमा सीधै इम्पोर्ट र एक्सपोर्टको विकल्प हुन्छ। यहाँ, सिम कार्डमा निर्यात पप विन्डो (pop window)मा export to sim card चयन गर्नुपर्नेछ। अब तपाईंको सम्पर्कहरू फोनबाट सिम कार्डमा ट्रान्सफर हुनेछ।
फोटो भिडियो स्थानान्तरण- यदि तपाईं चाहनुहुन्छ भने, तपाईं आफ्नो मिडिया फाइलहरू, अडियो र भिडियो डाटा मेमोरी कार्डको साथमा नयाँ फोनमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुनेछ।
मेसेज स्थानान्तरण- तपाईं मेसेजहरु एउटा फोनबाट अर्को नयाँ फोनमा हस्तान्तरण गर्न निःशुल्क एसएमएस ब्याकअप र रिस्टोर एपको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यस बाहेक, तपाईं केहि एप्सको मद्दतले पनि यो गर्न सक्नुहुनेछ।
ह्वाट्सएप च्याट ट्रान्सफर- यदि तपाईंको ह्वाट्सएप डाटा पुरानो एन्ड्रोइड स्मार्टफोनमा बाह्य माइक्रो एसडी कार्डमा सेभ गरिएको छ भने यसलाई निकालेर नयाँ फोनमा घुसाउनुहोस् । तर यदि ह्वाट्सएप डाटा आन्तरिक एसडी कार्ड वा आन्तरिक मेमोरीमा बचत गरिएको छ भने, एसडी कार्ड वा ह्वाट्सएप फोल्डर पुरानो फोनबाट नयाँ फोनको उही फोल्डरमा स्थानान्तरण गर्नुहोस्। यदि त्यहाँ एसडी कार्ड छैन भने आफ्नो फोनको स्पेशिफिकेसन जाँच गर्नुहोस्। यो पनि ध्यान दिनुहोस् कि ट्रान्सफरको समयमा सबै डाटा वा सबै फाइलहरू पूर्ण रूपमा स्थान्तरण गरियो। त्यसपछि नयाँ फोनमा उही नम्बरबाट ह्वाट्सएप इन्स्टल गर्नुहोस्।
एप्स स्थानान्तरण- हाम्रो फोनमा त्यस्ता धेरै एपहरू छन् जुन हामी नयाँ फोनहरूमा पनि नियमितरुपमा प्रयोग गर्दछौं। यस अवस्थामा तपाईले एक हिलियम नामक निःशुल्क एप प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसले सबै एपहरूको फूल ब्याकअप लिन्छ। तपाईंको पुरानो डिभाइसमा यो एप डाउनलोड गर्नुहोस् र त्यसपछि यो एपको ब्याकअप गर्नुहोस्। तपाईंले माइक्रोएसडी कार्ड, एक्स्टर्नल यूएसबी स्टोरेज वा कम्प्युटरमा ब्याकअप गर्न सक्नुहुनेछ।